Vaksiny? Fitsapana? Tsy eto! Tsidiho ny nosy tropikaly Koh Larn
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Vaksiny? Fitsapana? Tsy eto! Tsidiho ny nosy tropikaly Koh Larn
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Safety • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Nosy Koh Larn
Nosokafana indray ireo mpitsidika ny nosy Koh Larn any Thailand ary tsy mila mampiseho porofo momba ny vaksinina na fitsapana ratsy, na izany aza, ny fameperana manohitra ny COVID dia mbola mitohy hatrany.
Manomboka androany, ny nosy kely misy ny Hoalan'i Thailand dia mandray mpitsidika fa tsy mila mampiseho porofo amin'ny vaksinina na fitsapana COVID ratsy.
Ireo mpitsidika iraisam-pirenena dia mila mampiseho ny pasipaorony raha toa kosa ka tsy maintsy mampiseho kara-panondro ny Thai.
Ny fepetra COVID-19 mahazatra manalavitra ny fiaraha-monina dia mbola manan-kery ao amin'ny nosy Koh Larn.
Nisokatra indray i Koh Larn androany alarobia 1 septambra 2021 ho an'ny mpitsidika nefa tsy hitaky vaksiny na haneho porofo amin'ny fitsapana ny COVID-19. Pasipaoro ho an'ny vahiny na ID Thai ho an'ny teratany Thai no takiana.
Nikatona fanintelony ny nosy hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana tamin'ny 9 aogositra. Ny fisokafan'ny 1 septambra izao dia hahitana ny Thai sy ny vahiny takiana haneho famantarana ary handalo ny fomba mahazatra ny fepetra fanalavirana ara-tsosialy, fa tsy mila mampiseho porofo misy vaksiny COVID-19 na valin'ny fitsapana coronavirus ratsy.
Iray volana lasa izay izay Nanantena ny tsy handray ireo mpizahatany i Thailandy na aiza na aiza mandritra ny fotoana kelikely.
Ny serivisy Ferry mankany sy avy any Bali Hai Pier ary ny seranan-tsambon'i Koh Larn dia hiasa amin'ny 7:00 maraina, 12 tolak'andro, ary 00:5 hariva. Azo ampiana fotoana fanampiny arakaraka ny tinady. Speedboats koa dia afaka manome serivisy amin'ny taha ambony kokoa raha toa kosa ny sambo mpamatsy entana dia hihazakazaka toy ny mahazatra.
Vantany vao nosokafana, ny trano fisakafoanana an'i Koh Larn dia mbola hisokatra hatramin'ny 8:00 alina amin'ny fahafaha-manao 75% hipetrahana ivelan'ny trano / tsy misy rivotra ary amin'ny 50% ho an'ny seza anatiny sy rivotra. Tsy azo atao ny mivarotra toaka.
Ny orinasa, ao anatin'izany ny magazay mora vidy, dia afaka miasa manomboka amin'ny 4:00 maraina ka hatramin'ny 8:00 alina. Afaka misokatra ara-dalàna ny trano fandraisam-bahiny fa tsy afaka manokatra dobo filomanosana, efitrano fivoriana, na manolotra fotoam-pety.
Misokatra ny moron-dranomasina mba hiala sasatra, fa tsy avela ny hetsika ataon'ny vondrona. Voafetra ho an'ny olona 5 ny fivoriana, ary mijanona amin'ny toerany ny ora tsy fahazoana mivoaka alina manomboka amin'ny 9:00 alina ka hatramin'ny 4:00 maraina.
Koh larn, indraindray antsoina hoe Coral Island ary ny fotoana hafa antsoina hoe Ko Lan, dia miorina amoron'ny morontsirak'i Pattaya any amin'ny Hoalan'i Thailand. Na eo aza ny halehibeny - 4 km ny lavany ary 2 km ny sakany - ilay nosy kely dia feno moron-dranomasina miaraka amina mpikatroka fanatanjahan-tena anaty rano toy ny par sailing miaraka amin'ireo toeram-pialofana sy trano fisakafoanana izay manolotra lovia vaovao azo trandrahana isan'andro.